Tsy fahombiazan'i Thomas Cook: Iza no atokisana ary ahoana ny fomba fifandraisana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy fahombiazan'i Thomas Cook: Iza no atokisana ary ahoana ny fomba fifandraisana
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Tsy dia misy vidiny velively izao ny fizaràn'i Thomas Cooks amin'izao fotoana izao. Mpizahatany britanika an'arivony no miandrandra ny fialan-tsasatr'izy ireo dia tsy mahazo antoka raha tena mandeha na aiza na aiza izy ireo. Ny alahady dia nanandrana nitoky tamina fahatokisan-tena ilay mpandraharaha mpizahatany anglisy. Tian'i Thomas Cook ny mpanjifan'izy ireo hatoky tena fa handeha hanao dia an-trano izy ireo mandritra ny vanim-potoana fahavaratra, ary koa i Thomas Cook te-hanome fahatokisana ireo mpamatsy azy ireo fa hahazo karama amin'ny serivisy izy ireo.
Ny fomba fijerin'ny orinasan'ny dia lavitra dia ratsy noho ny nandrasana ary ny habetsaky ny trosa nitazona ny 738 tapitrisa-pounds (940 tapitrisa dolara) lanin'ny mpiasan'ny fizahan-tany sy ny zotram-piaramanidina, hoy i Citi. Ity dia "manondro ny sandan'ny sandam-bola", hoy ireo mpandalina notarihin'i James Ainley nanoratra tamina naoty, nanapaka ny tahiry ho isa naoty.
Miaraka amin'ny fanambarana mampivarahontsana momba ny fivarotana ilay mpivarotra fivarotana lehibe Thomas Cook taorian'ny fahaverezany £ 1.5 miliara dia nitondra ny faharatsian'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpitsangatsangana ho vaovao indray. Ny herinandro lasa teo dia nanoro hevitra ireo mpampiasa vola ny banky Wall Street Citigroup mba hivarotra fizarana ao amin'ny orinasan-dia. Ny fahatokisana fa afaka miaina mandritra ny taonan'ny famandrihana DIY amin'ny Internet ireo maso ivoho dia manify taratasy.
Ny tena fahafaha-miaina sy ny fahafaha-mizaha, manoratra sidina sy fialantsasatra an-tserasera, miaraka amin'ireo olon-tianao mandray anjara amin'ilay dingana ao an-trano, amin'ny fotoana mety aminao, dia manintona ny ankamaroantsika.
Nandeha ny andro rehefa manao dia mandritra ny ora fiasana ianao, mankany amin'ny maso ivoho eny amin'ny arabe. Fantatray fa izany no hany fomba famandrihana fialantsasatra tamin'ny andro taloha ratsy. Ny famandrihana an-tserasera tamin'izay dia mistika sy jargonista ary tsy azo jerena afa-tsy amin'ny rafitry ny solosaina tohanan'ny fiaramanidina mampiasa kaody manokana sy mpiasa voaofana. Tsy nahalala izay hanombohana ny ankamaroantsika. Ankehitriny dia mivoaka miaraka amin'ny solosaina finday, mipetraka eo am-pandriana ao anaty akanjo mandrianao, na eo amin'ilay olona mipetraka miaraka amina dite kaopy ary mora toy ny 1-2-3.
Ny sasany amin'ny fianakaviako dia manana orinasam-pitetezana. Tsy inona izany fa ny fandraharahana taloha. Miasa amin'ny DMC ny namako - azo antoka fa tsy izany no taloha.
Ny mpanao gazety BBC malaza iray miresaka amin'ny hetsika indostrian'ny fizahan-tany dia nampitandrina ny indostrian'ny fizahantany fa tsy manana fahatokisana nankafiziny taloha intsony ireo marika lehibe sy miorina tsara. Marina izany. "Miaina krizy fitokisana isika", hoy ny fampitandreman'ilay mpanao gazety. Androany fa tsy mihaino 'manam-pahaizana' na 'andrim-panjakana' ankehitriny, dia mino kokoa ny hevitry ny mpiara-miasa aminay, na ny namantsika ao amin'ny Facebook izahay.
Nilaza ihany koa ilay mpanao gazety BBC, “Miaina amin'ny vanim-potoana izay ahitan'ny fihetseham-po bebe kokoa noho ny zava-misy isika. Ankehitriny ny olona dia manome lanja ny fangorahana noho ny fahaizana manokana. Tokony hizaha ny dikan'izany amin'ny fomba tokony hiresahanao amin'ny mpanjifa ianareo rehetra. ”
Mazava izany fa ny fivarotana dia efa niova ifotony, toy ny novinavinaina mialoha. Ny atahorako miaraka amin'ny maro hafa dia ny tsy ahafahantsika manao indostria, hahomby amin'ny fanatanterahana ireo fanovana lehibe ireo ary hiantso fiovan'ny paradigma goavambe mba hizaha ny fomba firesaka amin'ny olona amin'ny fomba mifandraika amin'izy ireo. Misy atahorana ho an'ny indostria rehetra izay tsy mifanaraka firy amin'ny mpihaino vaovao. Aza adino Kodak.
Toa tsy fahombiazana farany i Thomas Cook, fa tao anatin'ny 18 volana lasa dia betsaka ny tsy fahombiazan'ny mpivarotra noho ny hatramin'ny nanombohan'ny taonjato. Marika maro no very ny kanto amin'ny fifandraisana amin'ny tsena. Tsy hain'izy ireo ny mifandray amin'ny mpanjifa.
Ny fianakaviako dia efa miresaka momba ny fanamorana sy fifindra any amin'ny faritra hafa amin'ny fizahan-tany sy fitsangatsanganana. Manantena aho fa mbola tsy tara io.